Nahaverezana basy sy vola 100 tapitrisa Ar: tratra ny andian-jiolahy nanafika ilay Sinoa | NewsMada
Tratra ireo jiolahy tompon’antoka tamina fanafihana sinoa iray tany Manakara, ny taona 2015. Lasan’ireo mpanafika ny vola 100 tapitrisa Ar sy ny basy iray. Hita tany am-pelatanan’ireo jiolahy ilay basy…
Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny kaomisarian’Ambalavao Tsienimparihy, ny talata lasa teo, ireo jiolahy miisa telo voarohirohy ho tompon’antoka tamina fanafihana teratany Sinoa iray tany Manakara, ny volana aogositra 2015. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy, nahazo loharanom-baovao ny polisy fa notafihin’ny andian-jiolahy ity Sinoa avy any Manakara ity ka very tamin’izany ny vola mitentina 100 tapitrisa Ar sy ny basy marika Maverick (indimy mipoaka) iray. Tsy vitan’izay fa mbola notifirin’ireo jiolahy koa ilay Sinoa ary mbola mihorohoro an-tsaina hatrany aza hatramin’izao vokatr’ity fanafihana nahazo azy ity. Nanao ny fikarohana avy hatrany ny polisy taorian’izay ka nisy jiolahy telo efa voasambotra noho ity raharaha ity ary naiditra avy hatrany ao amin’ny fonjaben’i Manakara. Nitohy ihany ny fikarohan’ny polisy ka ny talata 19 marsa 2019 lasa teo, azon’ny polisy ao Ambalavao tamina olona iray ao Sandrakely, kaominina ambanivohitr’Andonaka, ny basin’ilay Sinoa notafihin’ireo jiolahy. Voasambotra tamin’io fotoana io koa ny lehilahy iray nitazona azy miaraka amin’ireo olona nivarotra ilay basy taminy. Niaiky ny heloka vitany ry zalahy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy.
Jiolahy iray hafa nahatrarana basy vita gasy…
Saron’ny polisy noho ny fiaraha-miasan’ireo mpanome loharanom-baovao koa ny jiolahy iray antsoina hoe Martin, monina ao amin’ny kaominina ambanivohitr’Andonaka. Fantatra fa hoe manana basy vita gasy izay voalaza fa ampiasainy amina asan-dahalo ity jiolahy ity. Nidina tany an-toerana avy hatrany ny polisy, ny alarobia 20 marsa 2019 lasa teo. Noraisim-potsiny izy niaraka tamin’ireo basy vita gasy miisa roa izay nambaran’ny polisy fa tena mipoaka ary mamono mahafaty mihitsy ireto basy ireto. Tratra niaraka tamin’ireto basy ireo koa ny bala miisa valo. Mbola mitohy, araka izany, ny fanadihadiana ataon’ny polisy momba ity raharaha fahatrarana basy vita gasy ity. Tsy vao izao fa matetika ahitana mpanamboatra basy vita gasy rahateo amin’iny faritra atsimo iny ary ampiasain’ny dahalo amina fanafihana hatrany ny ankamaroan’ireny basy vita gasy ireny.